စင်္ကာပူမှာ အလုပ်လာရှာကြတဲ့ ရွှေမြန်မာများ အလုပ်မရခင် သွားကြတဲ့ နေရာတွေထဲက တစ်ခု။ ကွန်ရင်မယ်တော် ကျောင်းပါ။ Bugis ဘူတာ အနီးဝန်းကျင်မှာ တည်ရှိပြီးတော့ ရွှေမြန်မာများ အရောက်အပေါက်များရာ ပန်နီဆူလား ပလာဇာကနေ လမ်းလျှောက်မယ်ဆိုရင်လည်း မိနစ် ၂၀ ခန့်ကနေ အများဆုံး နာရီဝက်ခန့် လျှောက်မယ်ဆို ရောက်တဲ့ အကွာအဝေးမှာ တည်ရှိပါတယ်။ ကျောင်းဝင်းအတွင်းမှာတော့ ဓာတ်ပုံ၊ ဗီဒီယို ရိုက်ခွင့် ပိတ်ပင်တားမြစ်ထားပြီး လာရောက် ဖူးမျှော် ကြည်ညို ဆုတောင်းကြသူတွေနဲ့ အစဉ်သဖြင့် စည်ကားနေတတ်တဲ့ နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းဝင်းထဲ ၀င်လိုက်မယ်ဆိုရင် အ၀င်ဝနားမှာတင် အမွှေးတိုင်ထွန်း ဆုတောင်းနိုင်တဲ့ နေရာရှိတယ်။ အတွင်းရောက်လို့ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားနဲ့ ကွန်ရင်မယ်တော်တို့ကို ဦးချကန်တော့ပြီးပြီ ဆိုရင်တော့ ဘေးနားမှာ စာချပြီး ကံကြမ္မာဟောစာတမ်းလေးတွေ ထုတ်ယူနိုင်အောင် စာဗူးလေးတွေ ယူပြီး စာချလို့ ရတယ်။ အဲ စာချလို့ ကျလာတဲ့ တုတ်ချောင်းလေးပေါ်က တရုတ်လို ရေးထားတဲ့ ဟောစာတမ်းက ဘာကို ဆိုလိုတယ်ဆိုတာတော့ စာဗူးလေး ပြန်အပ်ပြီး ဟောစာတမ်းစာရွက်လေးတွေ လဲယူလို့ ရသလို၊ စာအုပ်နဲ့ ဖတ်လိုတဲ့ သူတွေကလည်း အလွယ်တကူ ဖတ်ရှုနိုင်စေဖို့ စာအုပ်လေးတွေ ထားထားပေးတာတွေ့ရပါတယ်။
ကွမ်ရင်မယ်တော်ကျောင်းနားက ဘုရားပန်းရောင်းတဲ့ ပန်းဆိုင်တစ်ခု။ Bugis Village ၀န်းကျင် တစ်နေရာ။
စနေ၊ တနင်္ဂနွေလို လူသွားလူလာများတဲ့ နေ့မျိုးတွေမှာ တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး ကြေးရောင် ဖြစ်စေအောင် လိမ်းခြယ်သပြီး တကယ့် ကြေးရုပ်ပုံစံမျိုး မလှုပ်မယှက် ရပ်နေပြတာမျိူးပါ။ လမ်းသွားလမ်းလာတွေက ရပ်ကြည့်ပြီး သဘောကျရင် ဓာတ်ပုံတွဲရိုက်တာမျိုး၊ ဆုချခဲ့တာမျိုး ပိုက်ဆံတွေ ရတတ်ပါတယ်။ ပုံစံတစ်မျိုးကို မိနစ် အနည်းငယ်ကြာရပ်ပြပြီးရင် နောက်တစ်မျိုး ပြောင်းတယ်။ ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့တဲ့နေ့ကတော့ ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး မကြာဘူး မိုးရွာမလို ဖြစ်လာတာနဲ့ ကြေးရုပ်လည်း ကြေးရုပ်မလုပ်နိုင်တော့ဘဲ သုတ်သုတ် သုတ်သုတ်နဲ့ အထုပ်လေး သိမ်းပြီး ပြန်သွားတာ တွေ့ရပါတယ်။ မိုးရွာရင် သူလိမ်းထားတာတွေနဲ့ မလွယ်ဘူးလေ။
စင်္ကာပူနိုင်ငံက ဆိုက္ကားဂိတ်တစ်ခု။ ကွန်ပျူတာနဲ့ အီလက်ထရွန်းနစ် ပစ္စည်းတွေ ရောင်းတဲ့ ဆင်းလင်း စကွဲယားနားက မီးပွိုင့်တစ်ခု
Go Green! Go Green! လို့လျှောက်လျှောက် အော်တတ်ပြီးတော့ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်တွေကို အလဟဿလုပ်ထားတဲ့ အလှဆင် ရေပန်းတစ်ခု
ရိုက်ဖြစ်သော ဓာတ်ပုံများ (၅)
ရိုက်ဖြစ်သော ဓာတ်ပုံများ (၄)
ရိုက်ဖြစ်သော ဓာတ်ပုံများ (၃)
ရိုက်ဖြစ်သော ဓာတ်ပုံများ (၂)
ဓာတ်ပုံတွေ ဝေမျှတာ ကျေးဇူးကိုလူအေး။ အလှဆင် ရေပန်းနေရာတော့ မရောက်ဖူးသေးဘူး။ ခုလို ဓာတ်ပုံ နှစ်ပုံ ဘေးချင်းကပ် side by side ဖြစ်အောင် ဘယ်လိုတင်ရမှာလဲ။
ကိုလူအေးရေ..။ ချက်(စ်)ဘောက်မရှိလို့ comment ရေးလိုက်ရတယ်..။ ကျွန်တော်လည်း စင်္ကာပူအကြောင်းလေ့လာနေတာဗျ.။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
my weblog; mivideocristiano.com
Havealook at my blog post ... http://chatalone.com/social3/link/19990
Feel free to surf to my webpage; clickbank-tribune.com
Also visit my blog post :: http://chatspotmd.com/blogs/34836/79502/abcs-of-spain-free-related-art
My weblog; olo.ru